Faroole oo iska horkeenaya dadyowga waqooyi bari iyo reer koonfur! | raascasayrmedia.com
← Saado cali oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyay magaalada London (daawo sawiradi soo dhowaynta)
Wafdigii Ahlu Sunah oo maanta isaga huleelaya Muqdisho iyo fashil ku yimid heshiiskii iyaga iyo Dowladda. →
May 6, 2010 · 12:50 am
Faroole oo iska horkeenaya dadyowga waqooyi bari iyo reer koonfur!
Munaasabad maanta lagu qabtay Madaxtooyada bosaso ee maamul goboleedka pland ayaa waxaa halkaas ka hadlay madaxwaynaha pland Faroole waxa uuna saxaafada u sheegay in ay ka saarayaan dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan deegaanada pland .
Waxa uu marar badan ka hadlay Faroole dadka soo barakacay ee ku dhaqan pland isago ugu baaqaayay in ay iskaga baxaan deegaanada pland.
Sanadkii hore ayay ahayd marki ay xukuumada pland ku eedaysay falalka amni daro ee ka soo cusboonaaday deegaanada pland dadka ka soo jeeda koonfur galbeed somaliya ee u soo barakacay deegaanada pland halkaas oo dad badan loo taxaabay jeelasha magaalooyinka pland .
Arinkaas ayaa waxa uu ka caraysiiyay dad badan oo ku dhaqan gobolada Bay iyo Bakool oo iyagu ku tilmaamay in arintaasu tahay mid nacayb ah oo lagu bartilmaamaysanaayo dadka ka soo jeeda goboladaas.
Waxa kale oo ay xukuumada pland xirxirtay dad ka soo jeeda ismaamulka somalida ee Ethiopia oo ay halkaas gacanta ugu galisay dawlada Ethiopia qaarna ayba ku naf waayeen jirdilo loogu gaystay jeelasha magaalooyinka pland waxaana aad uga carooday falalkaas dadka somaliyeed ee ku dhaqan deegaanada somaliyeed ee ay xooga ku haysato Ethiopia .
Hadaba falalkaan ayaa inta badan ka dhaca magaalo madaxda gacansiga pland Bosaso oo ah halka ay ku daban yihiin dadka ka soo barkacay colaadaha ka aloosan koonfurta somaliya iyo kuwa ka soo cararay hagardaamada gumaysiga Xabashida.
Warkaan uu saxaafada u mariyay Faroole barakacayaasha ku dhaqan pland siiba magaalada bosaso ayaa ah mid walwal ku abuuray dad badan oo barakacayaal ah madaama aysan ku noqon karin deegaanadi ay ka soo hayaameen ee colaadu ka alooysnayd halki ay gabaadka u soo raadsadeena la leeyahay waa inaad isaga guurtaan oo amniga ayaad ka soo horjeedaan.
Hadaba waxaa is waydiin mudan qofka miskiinka ah ee soo barakacay ee ka yimi koonfurta somaliya miyaa ah mid la soo galay hub pland? mise qof nolol maalmeedkiisi la hardamaaya ayaa ah mid amni daro sababi k ara ? jawaabta su,aalahaan shacab waynaha somaliyeed ayaan u daynayaa.
One response to “Faroole oo iska horkeenaya dadyowga waqooyi bari iyo reer koonfur!”
fuck faroole, He is notthing but warlord to me.he is a someone collecting money and want to get a reach and helping his tribe.He is not sameone who is helping my land or my people.when I hear he saying that he wil attack my lbaargaa land . I though where are my people.that is why if you dont have a community and milatary everyone sees you a weak tribe and they can’t give anything that helps your land.